लेनिन कस्ता थिए ?
April 21, 2017 Posted by Jhilko.com
कृष्णदास श्रेष्ठ भ्लादिमिर इलिच लेनिन श्रमिक मानवजातिको मुक्ति संघर्षको गौरवशाली इतिहासमा स्वर्णाक्षरमा र अमिट रुपले अंकित नाउँ हो । उनी एक सच्चा सर्वहारा क्रान्तिकारी नेता, नयाँ युगका नयाँ नेता थिए, जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति तथा सामथ्र्य एक महान् तथा उच्च लक्ष्यको सेवामा, अर्थात् श्रमिक जनगणको मुक्ति र सुखका लागि समर्पण गरे । उनको जीवनयात्रामा महान् रुसी कवि लर्मोन्तोवको एउटा कविता निम्न पङ्क्तिहरुमा उक्त कथन साँचो र पूरा रुपमा चरितार्थ भएको छ । एउटै मात्र विचार...बाँकी
लिम्बूहरु किरात हुन् ?
भवानी बराल किरात र लिम्बूको सम्बन्ध के हो भन्ने प्रसङ्गमा केही लेखकहरूले लिम्बूहरू किरात नै होइनन् भन्ने तर्क सारेपछि अन्योल सिर्जना भएको छ । लिम्बूहरू वास्तवमा नामको पछि जात वा थर नलेख्ने वा नझुण्ड्याउने समूहमा पर्दछन् । उनीहरूले लिम्बू लेख्नु अगावै ६ पुस्तासम्म राय लेखेको पाइएको छ । यसैताका कतिपय लिम्बूहरूले सेन लेखेको पनि पाइन्छ । योभन्दा अगाडि केही पुस्तासम्म नामको पछि हाङसमेत जोडेको पाइएको छ । हाङ शब्दको प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले नाम मात्र उल्लेख गरिन्थ्यो । जस्तै ः यलम्बर, गास्ती, स...बाँकी
२२ अप्रिल र चर्चा : केही विचारणीय प्रश्नहरुबारे
२२ अप्रैल, विश्व सर्वहारावर्गका महाननायक भ्ला.इ.लेनिनको जन्म दिवस र त्यस सन्दर्भमा विश्व सर्वहारावर्गको एक लडाकू टुकडी तथा नेपाली सचेत सर्वहारावर्गको राजनैतिक अग्रदस्ता ने.क.पा.को स्थापना दिवस । लेनिन कुशाग्र बुद्धि, विलक्षण प्रतिभा, बहुआयामिक व्यक्तित्व र सुदूर भविष्य द्रष्टा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ माक्र्सवादका व्याख्याता, प्रयोगकर्ता र विकासकर्ता मात्र नभएर लेनिनवादका प्रबर्तक समेत हुनुहुन्थ्यो । यिनै कारणले गर्दा नै अपेक्षाकृतरुपले कम विकसित, सर्वहारा वर्ग र उसको पार्टीको तुलनात्मकरुपले कम संख्य...बाँकी
चीनसँग ग्रेटर नेपालको सम्बन्धका प्रश्नमा
April 07, 2017 Posted by Jhilko.com
एक सहृदयी मित्रको सौजन्यमा म विगत एक वर्षमा ४ पटक चीन पुगें । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले एक–डेढ दशकदेखि ग्रेटर नेपालको अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा मेरो चीन भ्रमणलाई ग्रेटर नेपालसँग जोडेर कसैले हेर्न खोज्छ भने त्यो स्वाभाविक हो तर यथार्थमा त्यसरी हेरिएजस्तो केही भएको छैन । ग्रेटर नेपालका पक्षमा चीनले केही गरिदिने पो हो कि भन्ने आशंकाको सुविधा कसैलाई प्राप्त भए पनि यस्तो हैसियतमा म पुग्न सकेको छैन । अवसर पाउँदा ग्रेटर नेपालको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास प्राथमिकतामै...बाँकी
कोरा राजनीतिले मात्र समाजको समृद्धि हुँदैन
March 23, 2017 Posted by Jhilko.com
मानव समाज र प्रकृति एक अर्काका परिपुरक हुन । आखिर मानिस पनि प्रकृतिकै उपज हो । प्रकृतिमा सबैभन्दा बढी चेतनशील प्राणी मानिस हो । मानिसको विकास क्रम युगयुग हुँदै अगाडि बढेको छ । प्रकृतिभित्र वस्तु चिन्हित गरेपछि नै मानिस घर परिवारको रुपमा बस्दै आएको हो । घर परिवारको रुपमा बस्ने क्रम हुँदै मानिस प्रकृतिबाटै प्राप्त वस्तु र सम्पत्तिप्रति लोभिदै गयो । त्यसपछि त्यो लोभका कारण अलि बढी चेतना भएको मानिसले कम चेतना भएको अर्काे मानिसलाई धन कमाउन श्रम शोषण र अझपछि उसले आर्जन गरेको सम्पत्ति शोषण गर्न थाल्यो...बाँकी
सहमतिका लागि अझै पहल बढाउन आवश्यक
March 22, 2017 Posted by Jhilko.com
नेपालका प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र स्थानीय निर्वाचनका लागि सहमत छन् । अधिकार सम्पन्न बनेको स्थानीय तहको निर्वाचन भएमा जनताले आफ्नो शासनसत्ता घरआँगनमा नै भेट्टाउनेछन । यसैले निर्वाचन जतिसक्दो छिट्टो गरे जनतालाई लाभ हुन्छ । निर्वाचनको मधेसी मोर्चाले भने विरोध गरेको छ । मोर्चाको विरोधका कारण तोकिएको मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन होला कि नहोला ? निर्वाचन भएन भने नेपालको राजनीतिक दिशा, दशा के होला ? अनि स्थानीय निर्वाचन तोकिएकै समयमा भएन भने प्रदेश र केन्द्रको नि...बाँकी
दिल्लीमा नेपालसम्बन्धी गतिविधि तीव्र
March 21, 2017 Posted by Jhilko.com
लक्ष्मण पन्त २०७४ माघ ७ गते आउन लगभग १० महिनामात्र बाँकी छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार उक्त मितिभित्र स्थानीय तह, प्रदेश तह तथा संघीय संसदको निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ । तोकिएको समयभित्र निर्वाचन हुन नसके पहिलेदेखि नै योजनाअन्तर्गत प्रश्नहरुको कठघरामा खडा गराइएको संविधानमाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ । अझ त्योभन्दा पनि महङ्खवपूर्ण विषय राजतन्त्रको अन्त्यपछि निर्माण भएको नयाँ संघीय गणतन्त्रमाथि नै प्रश्नहरु खडा हुने छन् । मुलुकमा अस्थिरता चाहने भित्री–बाहिरी शक्तिहरु निरन्तर क्रि...बाँकी
बाबुराम भट्टराईलाई आपत पार्ने दस्तावेज
काठमाडौं । पार्टी भताभुंग हुने अवस्था सिर्जना भएपछि नयाँ शक्तिका नेता डा. बाबुराम भट्टराई आपतमा परेका छन् । रामेश्वर खनालले पार्टी छाडिसकेका छन् भने अन्य दिग्गजहरुले पनि नयाँ शक्ति छाड्न लागेका छन् । बाबुरामलाई पछिल्लो समयमा सबैभन्दा समस्यामा चाहिँ देव लिम्बूले पारिरहेका छन् । बाबुरामका विचार एकएक खण्डन गरेर लिम्बू अहिले चर्चामा छन् । पार्टी गलत बाटोमा लागेको, बाबुराम गलत बाटोमा लागेको भन्दै लिम्बूले कडा आलोचना गरिरहेका छन् । लिम्बूले असहमति जनाएपछि नयाँ शक्ति पार्टीले आफ्ना सदस्यहरुलाई नेता...बाँकी